Kenya oo ku cataabeysa wadahadal ay la furto dowlada Somaliya iyo wafdi Muqdisho yimid. | XAL DOON
Home NEWS Kenya oo ku cataabeysa wadahadal ay la furto dowlada Somaliya iyo wafdi...
Kenya oo ku cataabeysa wadahadal ay la furto dowlada Somaliya iyo wafdi Muqdisho yimid.
Muqdisho waxaa maanta kusoo wajahan wafdi ka socda Wasaaradda Arrimaha dibadda Kenya si ay qayb uga noqdaan wadaxaajood la isugu soo dhaweynayo Madaxda Dowladaha Soomaaliya & Kenya oo xiriirkoodu go’ay.
Muqdisho waxaa ku sugan wafdi ka socda Urur Goboleedka IGAD oo dhexdhexaadinaya Dowladaha Soomaaliya & Kenya, si loo dhammeeyo tabashada sababtay in xiriirka Diblumaasi ee labadaan Dowladood ee go’ay 15-kii December 2020.
Xubnaha ka socda Urur Goboleedka IGAD ayaa doonaya in ay xog dhageystaan Madaxda Dowladda Federaalka si ay u helaan dhabbaha loo marayo wadaxaajoodka Xukuumadaha Muqdisho & Nairobi.
Wakiilada ka socda Kenya, IGAD & Diblumaasiyiin katirsan Dowladda Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay tagaan Degmada Baladxaawo & deegaannada kale ay sheegtay Xukuumadda Federaalka in lagu diyaariyay Jabhad Kenya ay ku dooneyso in ay ku weerarto askarta DFS.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhiggeeda Kenya ku eedeysay ku xadgudubka Madaxbannaanida dhuleed, siyaasadeed, martigelinta shirar lagu duminayo & abaabulka ciidan u diyaarsan qaab jabhado oo ay ku heyso Magaalada Mandheera Dhulka Soomaalida Kenya maamusho.